May 21, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 3
Madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Deni oo socdaal rasmi ah ku jooga magaalada Gaalkacyo ayaa kulan uu la qaatay odayaal reer mudug ah ka hadlay taariikhda dadka reer muduga ah, waxa uuna halkaasi kasoo jeediyay hadalo kaftan ah.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in dadka reer muduga ay ahaayeen dad geesiyaan ah oo indha adag oo aan cabsan balse waayihii dambe ayuu sheegay in la arkay reer mudug badan oo cabsan balse waayihii dambe la arkay dad fylayo ah oo reer mudug kadhashay.
Deniyoow bal in aad doqon tahay hadalkaa sarbeebta ah dadka aad islahayd ku duqee baad amaantii ku soo dartay. Marka aad “reer Mudug” isku jumleysay Habar Gidir oo ah cadawga ugu xun ee ay Puntland leedahay iyana amaanta waad ku soo biirisay laakiin anigu geesinimo kollay ku ma aanan ogayn.
Deniyoow in aad warkaaga caddeyso ayay ku qurux badnayd laakiin macal asaf. Sidaas oo ay tahay, geesiyada Mudug ee dhabta ahi waa Leylkase iyo Mareexaan, hase yeesho ee haddii Cumar Maxamuudka aan qolyooyinkan la kala dilin giddigoodu waxay noqon lahaayeen libaaxyo aan libiqsanin.
Waxaa se geesiyada Puntland dhammaantood kala dilay xinka Maxamuud Saleebaan ka dhex aloosan iyo hoggaan xumada ka dhalatay ee tolweynaha Puntland kala faquuqday. Markii iigu war dambeysay Leylkasaha ayaa Habar Gidirta waranka Cumar Maxamuud gaashanka uga daruurayay. Maxaad xaqiiqadaas ka qabtaa oo aad ka qaban kartaa Deniyoow?
Deni waa nin Cismaan Maxamuud ah oo reer Qardho ah marka waxuu rabaa in uu ammaano walaalihiis Cumar Maxamud oo daggan Gaalkacyo markaasu ku tilmaamay geesinamadii Reer Mudug. Geesiyada reer Mudugna waa la yaqaan waa Sacad iyo Leelkase.
Cumar Maxamuud waa bootoolayaal waxeena la baxaan magacyo qatar ah sida Atoore oo kale laakiin waxeey isqariyaan maanta waxaa soo shaac baxday ceebtooda oo adduunka dhan laga wada ogaaday markii eey ku caddaatay in gabdhihii yar yaraa kufsi iyo dil iskuugu dareen.
Magaalada Gaalkacyo geybteeda waqooyiga hadda gabdhihi guryo kama soo bixi karaan cabsi daraadood in kufsi iyo dil laysku daro.
Tana ma Dameer cuqdad riman baa?¿ Oo yaa uureeyey? Maxmud saleeban